आउनुहोस् हामी कसरी काउन्टरटप मर्मत गर्ने काम गर्दछौं
सामग्री जस्तोसुकै भए पनि, यो उच्च तापमान सखापबाट डराउँछ। प्रयोगको क्रममा, क्याबिनेटहरूसँग तातो भाँडो र तातो पानीको बोतलहरूको सिधा सम्पर्क जोगिन होशियार हुनुपर्छ। तिनीहरूलाई भाँडो र्याकमा राख्न उत्तम हुन्छ; अपरेशनको बेला काउन्टरटपहरू र ढोका प्यानलहरू तीर्थ वस्तुहरूको साथबाट खार्नबाट बच्न कोसिस गर्नुहोस्। चिन्ह तपाईंले तरकारीहरू काट्नुपर्दछ र काट्ने बोर्डमा खाना तयार गर्नुपर्दछ। चाकूको निशान बेवास्ता गर्नका साथै, यसलाई सफा र स्वच्छ गर्न सजिलो छ; रासायनिक पदार्थहरूले धेरै सामग्री काउन्टरटप्समा क्षतिग्रस्त प्रभाव पार्दछ, उदाहरणका लागि, स्टेनलेस स्टील काउन्टरटप्सले नुनको सम्पर्कमा पर्दा खिया लाग्न सक्छ। त्यसैले, हामीले सोया ससको बोतलहरू र अन्य चीजहरू सीधा काउन्टरटपमा नराख्न पनि ध्यान दिनुपर्दछ; कृत्रिम बोर्ड क्याबिनेटहरूले पानीको दाग लामो समयको लागि काउन्टरटपमा बस्नु हुँदैन।
केitchen कैबिनेट काउन्टरटप्सकृत्रिम ढु stone्गा, फायरप्रूफ बोर्ड, स्टेनलेस स्टील, प्राकृतिक ढु stone्गा, लग र अन्य सामग्रीहरू बनेका छन्। बिभिन्न सामग्रीहरु संग सफाइ गर्ने बिभिन्न तरीकाहरु छन्। कोभान्छाको क्याबिनेटकृत्रिम ढु stone्गा र स्टेनलेस स्टीलको बनेको कडा पेसा, स्टिलको बल, रासायनिक एजेन्ट वा स्टील ब्रशेसको साथ सफा गर्नु हुँदैन। नरम तौंलीहरू, सफ्ट स्काउरीs प्याडहरू पानीको साथ प्रयोग गर्नुहोस् वा ब्राइन्टरले पुछ्नुहोस्, अन्यथा यसले खरोंचहरू वा क्षरण निम्त्याउँछ। फायरप्रूफ बोर्डबाट बनेको क्याबिनेटलाई घरेलु क्लिनरले सफा गर्न सकिन्छ, नायलन ब्रश वा नायलन बलले पछ्याउन सकिन्छ र त्यसपछि भिजेको तातो कपडाले पुछ्न सकिन्छ। प्राकृतिक ढु stone्गा काउन्टरटोपले टोल्युइन क्लीनरको सट्टा नरम स्काउरी pad प्याड प्रयोग गर्नुपर्दछ, अन्यथा सेतो दागहरू हटाउन गाह्रो हुनेछ। यदि क्याबिनेट लगहरू बनेको छ भने, धुलोलाई पहिले डस्टरले हटाउनुपर्नेछ, र त्यसपछि सुक्खा कपडा वा लग मर्मत लोशनले सफा गरिनु पर्छ। भिजेको रगहरू र तेलमा आधारित सफाई उत्पादनहरू प्रयोग नगर्नुहोस्।
tificial † कृत्रिम ढु stone्गा कुनै पोरिज नभएको ठोस सामग्री हो र यसमा सबै प्रकारको दाग धूपको प्रतिरोध गर्ने विशेषता रहेको छ। खाना, खाद्य तेल, सोया सॉस, सिरका, मदिरा, आयोडिन, साइट्रिक एसिड, लिपस्टिक, जुत्ता पालिस, मसी र अन्य दागहरूले प्राय: जसो दागहरूमा असर गर्छ। विशेष कृत्रिम ढु stone्गाले कुनै खतरा पैदा गर्दैन, यसको स्थायित्व पहिले नै धेरै राम्रो छ, मैन बिना नै राख्नको लागि सजिलो छ र लागत बचत सुविधाहरूले यसलाई घर र व्यावसायिक स्थानहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्दछ।
१. दैनिक सफाई र मर्मत सम्भार एकदम सरल छ
पानीको दाग वा थोरै मात्रामा दाग तुरून्त हटाउन सकिन्छ, नम कपडाको साथ सफा गरेर र थोरै मात्रामा घर सफा गर्ने वा साबुन पानी थपेको।
२. गम्भीर दाग वा कटौती
यो घरको विच्छेदन पाउडर र तरकारी कपडाको द्वारा सफा द्वारा हटाउन सकिन्छ। अधिक कठोर प्रदूषण ठीक स्यान्डपेपर (१-4०--4००) को साथ हटाउन सकिन्छ। यसको सतहको चमक कायम गर्न फेरि तरकारी कपडा र पानीले सफा गर्नुहोस्।
St. कडा दागहरू, सिगरेट बट्समा मार्क मार्क्स वा केही कट मार्कहरू
स्यान्डपेपर र पानी दाग ​​वा कटौती हटाउन र एक पॉलिशिंग मेशीन संग पोलिश को उपयोग गर्नुहोस्। अधिक गम्भीर क्षतिको लागि, कृपया पोलिस्टोन डीलरहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस्, जोसँग स्कार्हरू मर्मत गर्न कौशल र उपकरण छन्।
counter the काउन्टरटपमा दागहरूको उपचार विधि:
१. रातो मसीको दाग: पहिले नयाँ दागहरू चिसो पानीले धुनुहोस्, त्यसपछि न्यानो साबुनको घोलमा केही समयको लागि भिजाउनुहोस्, त्यसपछि पानीले कुल्ला गर्नुहोस्; पुरानो दागहरू पहिले डिटर्जेंटले धोइन्छ, र त्यसपछि 10% रक्सी समाधानको साथ हटाउनको लागि।
२. मसी दाग: धानको गेडा र डिटर्जेंटसँग राम्ररी मिलाउनुहोस्, दाग भएको खण्डमा लागू गर्नुहोस्, यसलाई घसीट्नुहोस्, र पानीले कुल्लाउनुहोस्; तपाईले रक्सीको एक अंश र साबुनको दुई भागको घोल प्रयोग गरी बारम्बार रगल्न सक्नुहुन्छ, जसको राम्रो परिणाम पनि छ।
Ball. बल पोइन्ट पेन तेल दाग: सामान्य अभ्यास दाग मुनि एक तौलिया राख्नु, एक सानो ब्रस्टल ब्रश प्रयोग, यो मदिरा संग ओसिलो, र बिस्तारै दाग सफा गर्नु हो। दाग भंग भएपछि र फैलिएपछि, चिसो पानीमा भिजाउनुहोस्, साबुन र हँसिलो स्क्रब गर्नुहोस्, यसलाई दुई वा तीन पटक दोहोर्याउनुहोस्, तपाईं मूल रूपमा बलपोइन्ट पेन तेल हटाउन सक्नुहुन्छ। यदि धुने पछि त्यहाँ बाँचेको थोरै मात्र छ भने, यसलाई तातो साबुन पानीमा भिजाएर वा उमालेर हटाउन सकिन्छ।
Mil. फफूको दाग: २% साबुन मदिरा समाधानको साथ सफा गर्नुहोस्, त्यसपछि%% -5% सोडियम हाइपोक्लोराइट वा हाइड्रोजन पेरोक्साइडसँग मिसाउनुहोस्, र अन्तमा धुनुहोस्।
भान्सामा ब्याक्टेरियाको विकासलाई कसरी रोक्न सकिन्छ
मोड्युलर वार्डरोबको फाइदाहरू र स्थापना चरणहरू